लायन्स र लियो क्लव कपिलवस्तुको विश्व मधुमेह दिवसको अवसरमा सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न |
गृह पृष्‍ठ कपिलबस्तु लायन्स र लियो क्लव कपिलवस्तुको विश्व मधुमेह दिवसको अवसरमा सचेतना कार्यक्रम...
लायन्स र लियो क्लव कपिलवस्तुको विश्व मधुमेह दिवसको अवसरमा सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न
प्रकाशित मिति : २०७७ कार्तिक २९ , शनिबार १९:१५
लायन्स क्लव अफ कपिलवस्तु र लियो क्लव अफ कपिलवस्तुको संयुक्त आयोजनामा विश्व मधुमेह दिवसको अवसरमा सचेतना तथा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न गरेको छ
। आज वाणगंगा नगरपालिकाको पिपरा देखि चार नम्बर जितपुर चोक सम्म सचेतना ¥याली लायन्स तथा लियो क्लवका सदस्यहरु, सुरक्षाकर्मीहरु तथा स्थानियहरुको उपस्थितीमा सम्पन्न गरेको छ । आयोजित सचेतना ¥यालीमा करीव १५० भन्दा बढीको सहभागीता रहेको थियो ।
यस्तै आजै कार्यक्रमको अवसरमा निशुल्क मधुमेह जाँच स्वास्थ्य शिविर पनि सम्पन्न गरेको छ । कपिलवस्तुको चार नम्बरमा रहेको शान्त होमीयो फार्मेसी (गोर्खाली आयुवेदिक औसधालयमा) आयोजित स्वास्थ्य शिविरमा करिव १५० भन्दा बढीले मधुमेह जाँच गरेका थिए । आयोजित कार्यक्रम लायन्स क्लव अफ कपिलवस्तुका टेमर शान्तराज गैरेको संयोजकत्तव रहेको ला. कृष्ण के.सी र ला. धातानन्द भुसालले कार्यक्रमको विषयवस्तुमा माथि प्रकाश पार्नुभएको थियो ।
यस्तै कार्यक्रम लायन्स क्लव अफ कपिलवस्तुका सचिव राम सुभागे थारुको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको लायन्स क्लव अफ कलिवस्तुका सह–सचिव ओम प्रकाश घिमिरेले ई–साझाकुरालाई जानकारी दिनुभएको छ । आयोजित कार्यक्रममा लियो क्लवका अध्यक्ष मदन पौडेल तथा लायन्सका सदस्यहरु दामोदर पन्थी, नवदत्त घिमिरे, राम प्रसाद भुसाल, महेन्द्र भुसाल लगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।
लायन्स क्लव अफ कपिलवस्तु र लियो क्लव अफ कपिलवस्तु दुवै संस्था कपिलवस्तु जिल्ला भित्र सक्रिय रहेका सामाजिक संस्था हुन् ।
पछील्लो पोस्ट बैंकका सवै शाखा तीन दिनका लागि बन्द भए
अगिल्लो पोस्ट हेल्प फर हेप्पिनेस संयाेजक क्षेत्रीले गरे बालगृहमा स्विटर वितरण
बहादुरगञ्जमा अक्सिजन सहितको आइसोलेसन सेन्टर स्थापना